विदेशी लगानी स्वीकृति र उद्योग दर्ता अब अनलाइनबाटै - Naya Patrika
विदेशी लगानी स्वीकृति र उद्योग दर्ता अब अनलाइनबाटै
स्वदेशी लगानीका ठूला र मझौला तथा विदेशी लगानीका सबैखाले उद्योग अनलाइनबाटै दर्ता हुने
सरकारले विदेशी लगानीको स्वीकृति र उद्योग दर्ता अब अनलाइनबाटै गर्ने भएको छ । उद्योगमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त बनाउन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उद्योग विभागले आइतबारदेखि अनलाइन सेवा सुरु गरेको हो । यससँगै अब उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आवेदन, दर्ता तथा स्वीकृतिलगायत प्रक्रिया अनलाइनबाटै गरिनेछ ।
उद्योग मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमबीच उद्योमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग विभागको अनलाइन सेवाको उद्घाटन गरे । उनले अनलाइनमा दर्ता भएका तीनवटा उद्योगलाई प्रमाणपत्र दिएर अनलाइन सेवाको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । उक्त अवसरमा मन्त्री जोशीले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बन्दै गएको भन्दै त्यसको उदाहरण उद्योग विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई समेत लिन सकिने बताए । ‘देश परिवर्तनको चरणमा रहेको र त्यसको सन्देशस्वरूप अनलाइन सेवा सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले औद्योगीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेका छौँ ।
उद्योग विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएफसी)को सहयोगमा अनलाइन सेवा सुरु गरेको हो । यसका लागि आइएफसीको करिब डेढ करोड रुपैयाँ तथा नेपाल सरकारको ५० लाख रुपैयाँ लागतमा उद्योगले अनलाइन सेवा जडान गरेको हो । सफ्टवेयर जडानमा सहयोग गरेको आइएफसीले सञ्चालनमा समेत सहयोग गर्नेछ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले उद्योग प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न अनलाइन सेवाले प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कुन–कुन सेवा अनलाइनमा ?
अब स्वदेशी लगानीकर्ताले मझौला तथा ठूला उद्योग अनलाइनबाटै दर्ता गराउन सक्नेछन् । साना उद्योग भने अनलाइनबाट दर्ता गरिनेछैन । विदेशी लगानीकर्ताले भने सबैखाले उद्योग अनलाइनबाट दर्ता गराउन सक्नेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानीको स्वीकृति अनलाइनबाटै लिन सक्नेछन् । त्यस्तै, भिसाको आवेदनसमेत अनलाइनबाटै दिन सक्नेछन् । विभागले भिसाको सिफारिस अनलाइनबाटै गरिदिने महानिर्देशक प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
कसरी लिने अनलाइन सेवा ?
उद्योग विभागको वेबसाइट (धधध।मयष्लम।अयm।लउ) मा गए आफूलाई चाहेको सेवा लिन सकिनेछ । ‘वेबसाइटमा गएपछि विभिन्न सेवाहरूको शीर्षक देखिन्छ, त्यहाँ गएर आफूलाई चाहेको सेवाका लागि अनलाइन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ,’ महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘आवश्यकताअनुसार फोन तथा इमेलबाट जानकारी र सहयोगसमेत लिन सकिन्छ ।’
अन्तरनिकाय डाटा सेयरिङ चाँडै
विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबीच एक महिनाभित्रै स्वचालित रूपमा तथ्यांक आदान–प्रदान प्रणाली (अटोमेटिक डाटा सेयरिङ सिस्टम) सुरु गरिने महानिर्देशक कोइरालाले बताए । यसपछि उद्योग विभागमा बुझाएको विवरण तथा कागजात कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछैन । त्यस्तै, तीन महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा समेत विवरण बुझाउनुनपर्ने गरी अन्तरनिकाय डाटा सेयरिङ गरिने उनले बताए ।
सचेत रहन उद्योगीलाई आग्रह
मन्त्रालयले साइबर क्राइम, डाटा ह्याकिङ र साइबर सेक्युरिटीमा सचेत रहन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । ‘अनलाइन सेवा जति सजिलो छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ,’ कोइरालाले भने, ‘विभागले आफ्नोतर्फबाट पूर्ण सुरक्षा दिन्छ, तर उद्योगीले पनि त्यतिकै सचेतना अपनाउनुपर्छ ।’